Ka qaybqaadashada shaqada iyo nolosha bulshada. | Samfunnskunnskap.no
Habkee ayaa loola qabsan karaa oo looga qeyb qaadan kartaa shaqada- iyo nolosha bulshada?
Qofka ku cusub Norwey waxa uu la kulmayaa waxyaalo ku cusub iyo waxyaalo aanu garanayn. Waa u muhiim qofka ajinebiga ah laftiisa iyo bulshada inteeda kale in qofku si dhaqso ah ula qabsado bulshada, oo uu dareemo inuu ka midyahey bulshada noorwiijiga.
Waxa ugu muhiimsan ee qofku samayn karo, waa barashada afnoorwiiga. Luqada siyaabo kala duwan ayaa loogu baran karaa iyo meelo kala duwan. Dadka intooda badani waxay tagaan koorasyo afnoorwiiji ah. Sidoo kale waa muhiim in la tago meelaha afka lagaga hadlo, sida goobaha shaqada, madadaalooyinka waqtiga firaaqada ee abaabulan iyo meelaha gaarka ah. Dad badan waxey wax badan ka bartaan daawashada barmaamijka carruurta ee telefishanka, wararka, barmaamiyada telefishanka ee qoraalka leh.
Koorasyada afnoorwiijiga waxaad ka heli kartaa tababar luqada ah. Tani waa qeyb dheeraad u ah casharada lagu qaato fasalada. Marka qofku qaadanayo tababarka luqada waxa uu helayaa fursad uu afnoorwiijiga kaga hadlo goobta shaqada. Meelaha tababarka waxey ka qeybqaadayaashu ka helayana afka oo ay bartaan iyo iyaga oo hela dad ay kala xidhaadhaan shaqada.
Qofka raba inuu Norwey shaqo ka helo, waa inuu isagu noqdaa qof firfircoon. Waa muhiim inuu luqada barto, waana muhiim inuu qofku xidhiidh la yeesho dadka, sidoo kale waa muhiim inuu xirfad ama waayo aragnimo shaqo uu yeesho. Dadka qaar waxey tababar shaqo ka helaan shirkad. Shaqo tababarista waxa habeeya Nav.
Qofka leh xirfad shaqo oo uu wadan kale kala yimi waxa uu codsan karaa in xirfadiisa Norwey looga aqoonsado. Waxa jita habab badan oo kala gedisan oo loo aqoonsado aqoonta qofka
War faahfaahsan waxaad ka heli kaartaa internetka:
Ka qaybqaadashada shaqada oo keliya ma aha in qofku ka dhex muuqan karo bulshada. Waxa jira ururo badan oo iskaa-wax-uqabso ah, ururada ciyaaraha, ururada siyaasada iyo diimaha oo uu qofku ka qayb qaadan karo. Tanina waa fursad muhiim ah oo qofku dad kale ku baran karo, luqada uu isticmaali karo, si uu u isticmaalo kartidiisa iyo waxyaalaha uu xiiseeyo.
Qofka carruur ku leh Norwey, waxa uu haystaa fursad dheeraad ah oo uu kula kulmi karo dad kale. Carruurtu waxey maalin kasta ka qayb qaataan ciyaaro badan iyo madadaalooyin xilliga firaaqada. Marka waalidku carruurtooda kala qeybqaataan oo u raacaan ciyaaraha ama ay ka qaybqaataan shirarka waalidiinta, waxay la kulmaan waalidiin kale. Noorwiiga u guura meel kale oo cusub oo Norwey ah, waxey badanaa istcimaalaan fursadan oo kale si ey u helaan saaxiibo cusub iyo xidhiidh dad cusub ay la yeeshaan. Sidaas oo kale ayey ajinebiguna sameyn karaan. Halkaas oo ey afnoorwiiga ku hadli karaan oo ey dad ku baran karaan.
Ku tabarasho luqad
khibrad shaqo oo qiimo leh
Tixraacyo muhiim ah
Carruur ma kuu joogtaa Norwey? U oggolow carruurta in ay laba wax oo kala duwan kula qabtaan iskuulka ka dib. La soco ilmahaaga, oo u adeegso fursadaa in aad is barataan dad cusub!